It is me. Ko Niknayman.: ဘာသာဖျက်၊ လူမျိုးဖျက်၊ တိုင်းပြည်ဖျက် မိစ္ဆာကောင်။
Posted by Ko Niknayman at 8:26 PM